Givingacompliment (ချီးမွမ်းစကားပြောကြားခြင်း) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 18, 2012 at 16:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းဖြင့်ပိုမိုခိုင်မြဲအောင် တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ လောကမှာကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတာကို မကြိုက်တဲ့လူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုခံချင်ကြတယ်။ ချီးမွမ်းတာ compliment ဟာ မြှောက်ပင့်ပြောဆိုတာ flatter နဲ့တော့ကွာပါတယ်။ စိတ်ထဲကမပါတဲ့မြှောက်လုံးတွေ ကိုတတ်နိုင်သမျှဖော့ပြော downgrading တတ်ရပါမယ်။ ဂျာမန်စကားပုံတစ်ခုက “မြှောက်ပင့်ပြောတဲ့သူစကားကို အမှန်ဖြစ်အောင်ကျိုးစားရမယ်” What flatterers say, try to make true. လို့ဆိုပါတယ်။ သူတပါးရဲ့အရည်အသွေးတစ်ခု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုစိတ်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ချီးမွှမ်းပြောဆိုစကားဟာ ကြားရသူရဲ့နားဝယ် ဘယ်လောက်ချိုမြိန်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာတောင်မလိုပါဘူး။ သူများကို ချီးမွမ်းတတ်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ချီးမွမ်းလာရင်လည်း ပြန်လည်ကျေးဇူးတုန့်ပြန်ပြောဆိုတတ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ချီးမွမ်းပြောဆိုရာမှာ သုံးတဲ့အသုံးလေးတွေ လေ့လာကြည့်ကြပါဦး။
Givingacompliment (ချီးမွမ်းခြင်း)
ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်၊ အ၀တ်အစား၊ အောင်မြင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေ၊ သူ့နားမှာချိုမယ့်အရာအားလုံးချီးမွမ်းနိုင်ပါတယ်။
• Your hair looks fantastic! (မင်းဆံပင်လေးကြည့်လို့လှလိုက်တာ။ ပုံလေးဆန်းလိုက်တာ)
• I really like your dress. (မင်းဝတ်စုံကိုတော့ကြိုက်သွားပြီ)
• That'sareally nice picture. (ဒီပုံလေးကတကယ်လှတယ်)
• Your new car is great. (မင်းတို့ကားသစ်ကကောင်းလိုက်တာ)
• I think your new hairstyle really suits you. (ငါ့အထင်တော့ မင်းဆံပင်ပုံစံသစ်ကမင်းနဲ့တကယ်လိုက်တယ်။
• That new shirt looks great on you! (အဲဒီအင်္ကျီသစ်ကမင်းနဲ့တကယ်လိုက်တယ်။)
• That’sagreat looking car. (ဒီကားကတော့တကယ်ခန့်ညားတာပဲ)
• You have such beautiful hair. (မင်းဆံပင်လေးတွေကလှလိုက်တာ)
• Whatalovely baby! (ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေး)
• Isn’t your ring beautiful? (မင်းလက်စွပ်ကလေးက လှသားပဲ။ မဟုတ်ဘူးလား)
• You didareally good job! (မင်းလုပ်တာတစ်ကယ်ကောင်းတယ်)
• You handled that situation really well! (ဒီအခြေအနေကို မင်းကိုယ်တွယ်လိုက်ပုံကောင်းတယ်)
• This food is delicious! (ဒီဟင်းတွေကအရသာရှိလိုက်တာ)
• Nice house! (အိမ်လေးကကောင်းတယ်)
• I'd just like to compliment you on your recent achievement. (ခင်ဗျားရဲ့လတ်တလောအောင်မြင်မှုအတွက်မင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်)
• That report you wrote was fantastic. (ခင်ဗျားရဲ့အစီရင်ခံစာ အရမ်းကောင်းတာပဲ)
• That'sanice T-shirt you’re wearing. (မင်းဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်လှတယ်)
ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းလာရင် ဒီအတိုင်းကြီးပီတိဖြစ်ပြီးပြုံးနေလို့မဖြစ်သေးဘူး။ သူ့ကိုတစ်ခုခုပြန်ပြောရမှာပေါ့။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ စကားပြောခန်းလေးတွေမှာ အေ က ဘီ ကို ချီးမွမ်းနေတာဖြစ်ပြီး ဘီ ကပြန်လည်တုန့်ပြန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
A: That’sareally nice sweater. ဒီဆွယ်တာလေးတကယ်ကောင်းတာပဲ။
B: Thanks./ That’s nice of you to say so. ကျေးဇူး/ ဒီလိုပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (တိုက်ရိုက်ပြန်တာမဟုတ်)
A: Nice rug. ခင်းနှီး(ကော်ဇော)ကောင်းလေးပဲ။
B: Thanks. I got it inastreet market in Morocco. ကျေးဇူး။ ဒါငါမော်ရိုကိုမှာလမ်းဘေးဈေးက၀ယ်ခဲ့တာ။
Downgrading the compliment
တစ်တစ်လေမှာ ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတာကို ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူး လို့ဖော့ပြောနိုင်တယ်။
A: That painting is really nice. ဒီပန်းချီကားကအရမ်းကောင်းတာပဲ။
B: Oh, it’s nothing. It was really cheap actually. I got it inasale. သြော် ဒီလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အရမ်းဈေးပေါတယ်။ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုမှာရခဲ့တာလေ။
A: I love that sofa you bought. မင်းဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုဖာကို သဘောကျတယ်။
B: Yes, me too. အင်းဟုတ်တယ်။ ငါရောပဲ။
ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကို ကိုယ်ကတော့သိပ်မကြေနပ်တဲ့အခါ ချီးမွမ်းလာတာကို ဆန့်ကျင်ပြောနိုင်တယ်။
A: You dealt with that very well. ခင်ဗျားအဲဒါကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်လိုက်နိုင်တာပဲ။
B: Oh, I don‘t think so. ကျွန်တော်တော့ဒီလိုမထင်ပါဘူးဗျာ။
Responding withaquestion
A: You did an excellent job yesterday. ရှင်မနေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် သိပ်ကောင်းတယ်။
B: Do you really think so? ဟုတ်လား။ ခင်ဗျားတကယ်ပဲဒီလိုထင်လား။
Shifting the credit
လုပ်တဲ့သူကအခြားတစ်ယောက်၊ ချီမွမ်းခံရသူကကိုယ်ဖြစ်နေရင် သူ့ဆီချီးမွမ်းစကားလွှဲပေးရမယ်။
A: That clock looks great in your living room! မင်းတို့ဧည့်ခန်းထဲကနာရီကပုံစံမိုက်တယ်။ (ကောင်းတယ်)
B: Thanks, but it was Keira who chose it. ကျေးဇူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ကီရာရွေးတာလေ။
လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာတစ်လမ်းသွားမဟုတ်တော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်တုန့်လှယ်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။ သေးငယ်တဲ့စကားချိုချို တစ်ခွန်းဟာလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်စွမ်းတယ်တဲ့လေ။
A: You look great. မင်းကြည့်ကောင်းတယ်။
B: And so do you. နင်လည်းဒီလိုပါပဲ။
အောင်မြင်မှုကို သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိသားစုနဲ့မျှဝေမခံစားရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပေးရမယ်။
A: You didafantastic job. ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့တာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
B: Thanks, but l couldn’t have done it without the others. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေသာမပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမွှမ်းတင်တာကိုမျှားချင်ရင် မပလွှားခြင်းဆိုတဲ့ငါးစာကအကျိန်းသေဆုံးပဲ (ချီးကျူးခံချင်ရင်ရိုးရိုးလေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲ) Modesty is the only sure bait when you angle for praise. လို့ Lord Chesterfield ကပြောခဲ့တယ်။
A: That’sabeautiful painting you’ve done. မင်းရေးခဲ့တဲ့ပန်းချီကားက သိပ်လှတဲ့ပန်းချီကားပဲ။
B: Oh, it’s nothing. l knocked it up inacouple of seconds. အို ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ လျှပ်တပျက်ရေးလိုက်မိတာပါ။
Building up the achievement
ဖော့ပြောရတဲ့အခါတွေရှိသလို သာသာထိုးထိုး ဖိပြောရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။
A: That was amazing. Well done! အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ချီးကျူးပါတယ်။
B: It's actuallyalot harder than it looks. တကယ်တော့ အဲဒါထင်တာထက်ပိုခက်တယ်ဗျ။
Complementing the complimenter.
A: Thanks. I’m glad you enjoyed it. ခင်ဗျားနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်။
B: Thank you. It’s really nice to hear that from someone with your experience.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူဆီကဒီလိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ်ကဘာမှသိပ်မလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့လူစွမ်းကောင်းလိုချီးကျူးခံရတာလဲရှိတာပဲ။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ခပ်ငေါ့ငေါ့လေးအရွှန်းဖောက်မှ မျက်နှာအထားရသက်သာမယ်လေ။
A: Well done for stopping that robber. ဒါးမြကိုတားလိုက်တာ တော်ပါပေတယ်။
B: I was actually trying to run away. l had no intention of trying to stop him. တကယ်တော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာဗျ။ သူ့ကိုဖမ်းဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိဘူး။
ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းလာသူတိုင်းကတော့ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေလောင်း တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကိုသံသယလေသံနဲ့ပြန်မေးနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးတဲ့ မိဘနဲ့သားသမီး၊ မောင်နှမ၊ သူငယ်ချင်း တွေကြားထဲမှာပေါ့။
A: That suit looks so good on you. အဲဒီအင်္ကျီလေးနဲ့သိပ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။
B: What are you after? မင်းဘာလိုချင်လို့လဲ။
ကဲ ဒါတွေကတော့ compliment ပေးတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့။ ချိုသာတဲ့ချီးမွမ်း စကားလေးတွေ ပြောတတ် တုန့်ပြန်တတ်ကြပါစေ။ ဒါပေမယ့် John Addington Symonds ပြောတဲ့ It is great to get praise from the lips of taciturnity. နှုတ်နည်းတဲ့သူဆီကကြားရတာမှပိုပြီးအရသာရှိတယ် ဆိုတာလည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦး။
အောက်က ဒီနာနဲ့မာရီယာတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတာလေးတွေကို လေ့လာလိုက်ရင်ပိုပြီးပြည့်စုံ သွားပါလိမ့်မယ်။
Old friends Dina and Maria are having lunch. It's the first time they’ve seen each other in ten years.
Dina: Maria, it’s great to see you again. You look fantastic!
Maria: Thanks! You look great, too. I love your hair.
Dina: You really haven't been to the hairdresser for ages.
Maria: l hear that youဒve been very busy lately.
You were nominated foraBusiness person of the Year award, weren't you?
Dina: Well, you know, I’ve gotagreat team behind me, so I really have them to thank. Hey, l read your latest novel. It's really funny!
Maria: Do you think so? The reviews haven't been that great.
Dina: Well, I loved it!
Maria: That’s very kind of you. It wasalot of hard work. By the way, I saw your
wedding photos on Facebook. Whatabeautiful dress!
Dina: Oh that old thing. It’s been in the family for generations.
Maria: And your husband looks likeareal catch.
Dina: Yeah, John isagreat guy.
Maria: He's so handsome. ..
Dina: [laughing nervously] Yeah heis. Oh, I’ve been meaning to ask, what's all this aboutabank robbery? You help catch one of the robbers, didn’t you?
Maria: Oh, it was nothing. I was just in the right place at the right time. I was
actually trying to run away. But I must have tripped and knocked the gun out of the robbers hands.
Dina: Incredible... Anyway, I must be going. We have to do this again soon.
Maria: Definitely! And bring John next time. I can't wait to meet him. He‘s so handsome.
Dina: Erm. yes, great.
လူအခငျြးခငျြး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ခြီးမှမျးပွောဆိုခွငျးဖွငျ့ပိုမိုခိုငျမွဲအောငျ တညျဆောကျနိုငျပါတယျ။ လောကမှာကိုယျ့ကိုခြီးမှမျးတာကို မကွိုကျတဲ့လူ မရှိသလောကျပါပဲ။ လူတှဟော ကိုယျ့ကို အသိအမှတျပွုခံခငျြကွတယျ။ ခြီးမှမျးတာ compliment ဟာ မွှောကျပငျ့ပွောဆိုတာ flatter နဲ့တော့ကှာပါတယျ။ စိတျထဲကမပါတဲ့မွှောကျလုံးတှေ ကိုတတျနိုငျသမြှဖော့ပွော downgrading တတျရပါမယျ။ ဂြာမနျစကားပုံတဈခုက “မွှောကျပငျ့ပွောတဲ့သူစကားကို အမှနျဖွဈအောငျကြိုးစားရမယျ” What flatterers say, try to make true. လို့ဆိုပါတယျ။ သူတပါးရဲ့အရညျအသှေးတဈခု၊ ပိုငျဆိုငျမှုတဈခုကိုစိတျထဲက နှဈနှဈကာကာ ခြီးမှမျးပွောဆိုစကားဟာ ကွားရသူရဲ့နားဝယျ ဘယျလောကျခြိုမွိနျမလဲဆိုတာ စဉျးစားစရာတောငျမလိုပါဘူး။ သူမြားကို ခြီးမှမျးတတျရမှာဖွဈသလို ကိုယျ့ကိုယျခြီးမှမျးလာရငျလညျး ပွနျလညျကြေးဇူးတုနျ့ပွနျပွောဆိုတတျရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ ခြီးမှမျးပွောဆိုရာမှာ သုံးတဲ့အသုံးလေးတှေ လလေ့ာကွညျ့ကွပါဦး။
Givingacompliment (ခြီးမှမျးခွငျး)
ခြီးမှမျးနိုငျတဲ့အရာတှကေအမြားကွီးရှိပါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့ ပုံပနျးသှငျပွငျ၊ အဝတျအစား၊ အောငျမွငျမှု၊ ပိုငျဆိုငျမှု တှေ၊ သူ့နားမှာခြိုမယျ့အရာအားလုံးခြီးမှမျးနိုငျပါတယျ။
• Your hair looks fantastic! (မငျးဆံပငျလေးကွညျ့လို့လှလိုကျတာ။ ပုံလေးဆနျးလိုကျတာ)
• I really like your dress. (မငျးဝတျစုံကိုတော့ကွိုကျသှားပွီ)
• That'sareally nice picture. (ဒီပုံလေးကတကယျလှတယျ)
• Your new car is great. (မငျးတို့ကားသဈကကောငျးလိုကျတာ)
• I think your new hairstyle really suits you. (ငါ့အထငျတော့ မငျးဆံပငျပုံစံသဈကမငျးနဲ့တကယျလိုကျတယျ။
• That new shirt looks great on you! (အဲဒီအကငြ်္ီသဈကမငျးနဲ့တကယျလိုကျတယျ။)
• That’sagreat looking car. (ဒီကားကတော့တကယျခနျ့ညားတာပဲ)
• You have such beautiful hair. (မငျးဆံပငျလေးတှကေလှလိုကျတာ)
• Whatalovely baby! (ခဈြစရာကောငျးလိုကျတဲ့ကလေး)
• Isn’t your ring beautiful? (မငျးလကျစှပျကလေးက လှသားပဲ။ မဟုတျဘူးလား)
• You didareally good job! (မငျးလုပျတာတဈကယျကောငျးတယျ)
• You handled that situation really well! (ဒီအခွအေနကေို မငျးကိုယျတှယျလိုကျပုံကောငျးတယျ)
• This food is delicious! (ဒီဟငျးတှကေအရသာရှိလိုကျတာ)
• Nice house! (အိမျလေးကကောငျးတယျ)
• I'd just like to compliment you on your recent achievement. (ခငျဗြားရဲ့လတျတလောအောငျမွငျမှုအတှကျမငျးကိုဂုဏျပွုပါတယျ)
• That report you wrote was fantastic. (ခငျဗြားရဲ့အစီရငျခံစာ အရမျးကောငျးတာပဲ)
• That'sanice T-shirt you’re wearing. (မငျးဝတျထားတဲ့တီရှပျလှတယျ)
ကိုယျ့ကိုခြီးမှမျးလာရငျ ဒီအတိုငျးကွီးပီတိဖွဈပွီးပွုံးနလေို့မဖွဈသေးဘူး။ သူ့ကိုတဈခုခုပွနျပွောရမှာပေါ့။ အောကျမှာပေးထားတဲ့ စကားပွောခနျးလေးတှမှော အေ က ဘီ ကို ခြီးမှမျးနတောဖွဈပွီး ဘီ ကပွနျလညျတုနျ့ပွနျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
A: That’sareally nice sweater. ဒီဆှယျတာလေးတကယျကောငျးတာပဲ။
B: Thanks./ That’s nice of you to say so. ကြေးဇူး/ ဒီလိုပွောတာကြေးဇူးတငျပါတယျ။ (တိုကျရိုကျပွနျတာမဟုတျ)
A: Nice rug. ခငျးနှီး(ကျောဇော)ကောငျးလေးပဲ။
B: Thanks. I got it inastreet market in Morocco. ကြေးဇူး။ ဒါငါမျောရိုကိုမှာလမျးဘေးစြေးကဝယျခဲ့တာ။
တဈတဈလမှော ကိုယျ့ကိုခြီးမှမျးတာကို ဘာမှမဟုတျပါဘူး။ ဒီလောကျလဲမဟုတျပါဘူး လို့ဖော့ပွောနိုငျတယျ။
A: That painting is really nice. ဒီပနျးခြီကားကအရမျးကောငျးတာပဲ။
B: Oh, it’s nothing. It was really cheap actually. I got it inasale. သွျော ဒီလောကျလဲမဟုတျပါဘူး။ တကယျတော့ အရမျးစြေးပေါတယျ။ အရောငျးအဝယျတဈခုမှာရခဲ့တာလေ။
A: I love that sofa you bought. မငျးဝယျလိုကျတဲ့ဆိုဖာကို သဘောကတြယျ။
B: Yes, me too. အငျးဟုတျတယျ။ ငါရောပဲ။
ကိုယျ့အောငျမွငျမှုကို ကိုယျကတော့သိပျမကွနေပျတဲ့အခါ ခြီးမှမျးလာတာကို ဆနျ့ကငျြပွောနိုငျတယျ။
A: You dealt with that very well. ခငျဗြားအဲဒါကို ကောငျးကောငျးကိုငျတှယျလိုကျနိုငျတာပဲ။
B: Oh, I don‘t think so. ကြှနျတျောတော့ဒီလိုမထငျပါဘူးဗြာ။
A: You did an excellent job yesterday. ရှငျမနကေ့လုပျခဲ့တဲ့အလုပျ သိပျကောငျးတယျ။
B: Do you really think so? ဟုတျလား။ ခငျဗြားတကယျပဲဒီလိုထငျလား။
လုပျတဲ့သူကအခွားတဈယောကျ၊ ခြီမှမျးခံရသူကကိုယျဖွဈနရေငျ သူ့ဆီခြီးမှမျးစကားလှဲပေးရမယျ။
A: That clock looks great in your living room! မငျးတို့ဧညျ့ခနျးထဲကနာရီကပုံစံမိုကျတယျ။ (ကောငျးတယျ)
B: Thanks, but it was Keira who chose it. ကြေးဇူး။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါကို ကီရာရှေးတာလေ။
လူမှုဆကျဆံရေးဆိုတာတဈလမျးသှားမဟုတျတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အပွနျအလှနျတုနျ့လှယျခြီးမှမျးတယျဆိုတာ လုပျသငျ့တဲ့အလုပျတဈခုပါ။ သေးငယျတဲ့စကားခြိုခြို တဈခှနျးဟာလူတဈယောကျကိုစိတျပြျောရှငျစနေိုငျစှမျးတယျတဲ့လေ။
A: You look great. မငျးကွညျ့ကောငျးတယျ။
B: And so do you. နငျလညျးဒီလိုပါပဲ။
အောငျမွငျမှုကို သူငယျခငျြး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျ၊ မိသားစုနဲ့မြှဝမေခံစားရငျ တဈကိုယျကောငျးဆနျသလိုဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကူညီခဲ့တဲ့သူတှကေိုလညျး ဂုဏျပွုပေးရမယျ။
A: You didafantastic job. ခငျဗြားလုပျခဲ့တာအရမျးကောငျးပါတယျ။
B: Thanks, but l couldn’t have done it without the others. ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခွားသူတှသောမပါခဲ့ရငျကြှနျတျောဒီလိုလုပျနိုငျခဲ့မှာမဟုတျပါဘူး။
အမှမျးတငျတာကိုမြှားခငျြရငျ မပလှားခွငျးဆိုတဲ့ငါးစာကအကြိနျးသဆေုံးပဲ (ခြီးကြူးခံခငျြရငျရိုးရိုးလေးနတောအကောငျးဆုံးပဲ) Modesty is the only sure bait when you angle for praise. လို့ Lord Chesterfield ကပွောခဲ့တယျ။
A: That’sabeautiful painting you’ve done. မငျးရေးခဲ့တဲ့ပနျးခြီကားက သိပျလှတဲ့ပနျးခြီကားပဲ။
B: Oh, it’s nothing. l knocked it up inacouple of seconds. အို ဒါဘာမှမဟုတျပါဘူး။ လြှပျတပကျြရေးလိုကျမိတာပါ။
ဖော့ပွောရတဲ့အခါတှရှေိသလို သာသာထိုးထိုး ဖိပွောရတဲ့အခါမြိုးမှာဒီလိုပွောနိုငျပါတယျ။
A: That was amazing. Well done! အရမျးကောငျးတာပဲ။ ခြီးကြူးပါတယျ။
B: It's actuallyalot harder than it looks. တကယျတော့ အဲဒါထငျတာထကျပိုခကျတယျဗြ။
A: Thanks. I’m glad you enjoyed it. ခငျဗြားနှဈသကျတယျဆိုလို့ဝမျးသာပါတယျ။
ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ခငျဗြားလိုအတှအေ့ကွုံရှိတဲ့လူဆီကဒီလိုကွားရတာ ၀မျးသာပါတယျ။
တဈခါတဈလလေညျး ကိုယျကဘာမှသိပျမလုပျလိုကျရဘဲနဲ့လူစှမျးကောငျးလိုခြီးကြူးခံရတာလဲရှိတာပဲ။ ဒီလိုအခါမြိုးမှာ ခပျငေါ့ငေါ့လေးအရှနျးဖောကျမှ မကျြနှာအထားရသကျသာမယျလေ။
A: Well done for stopping that robber. ဒါးမွကိုတားလိုကျတာ တျောပါပတေယျ။
B: I was actually trying to run away. l had no intention of trying to stop him. တကယျတော့ထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားနတောဗြ။ သူ့ကိုဖမျးဖို့လုံးဝစိတျကူးမရှိဘူး။
ကိုယျ့ကိုခြီးမှမျးလာသူတိုငျးကတော့ စိတျရငျးမှနျနဲ့ဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ အကြိုးလိုလို့ညောငျရလေောငျး တာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါကိုသံသယလသေံနဲ့ပွနျမေးနိုငျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ရငျးနှီးတဲ့ မိဘနဲ့သားသမီး၊ မောငျနှမ၊ သူငယျခငျြး တှကွေားထဲမှာပေါ့။
A: That suit looks so good on you. အဲဒီအကငြ်္ီလေးနဲ့သိပျကွညျ့ကောငျးတာပဲ။
B: What are you after? မငျးဘာလိုခငျြလို့လဲ။
ကဲ ဒါတှကေတော့ compliment ပေးတာနဲ့ပတျသကျတာလေးတှပေေါ့။ ခြိုသာတဲ့ခြီးမှမျး စကားလေးတှေ ပွောတတျ တုနျ့ပွနျတတျကွပါစေ။ ဒါပမေယျ့ John Addington Symonds ပွောတဲ့ It is great to get praise from the lips of taciturnity. နှုတျနညျးတဲ့သူဆီကကွားရတာမှပိုပွီးအရသာရှိတယျ ဆိုတာလညျးမမကွေ့ပါနဲ့ဦး။
အောကျက ဒီနာနဲ့မာရီယာတို့နှဈယောကျပွောနကွေတာလေးတှကေို လလေ့ာလိုကျရငျပိုပွီးပွညျ့စုံ သှားပါလိမျ့မယျ။
ဗြိတိသျှကောင်စီ (ရန်ကုန်) တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁ဝ) ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် (အသက် ၇ နှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို) တက်ရောက်လိုသူများ လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကြေးမှာ မြန်မာငွေ တစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့မဟုတ်) သန်းခါင်စာရင်း/မွေးစာရင်း မူရင်းဖြင့် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေရန် နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှစ၍ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၉:ဝဝ) မှ ညနေ (၅:ဝဝ) အတွင်းလာရောက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ IELTS Preparation သင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
IELTS Preparation သင်တန်းတက်လိုပါက ပထမဦးဆုံး အရည်ချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရပါသည်။ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများကို ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်နေ့မှ (၁ဝ) ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် (အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို) လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ IELTS Preparation အတန်းမှာ နာရီ (၆ဝ) သင်တန်း ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လျှင် (၃) ရက် တစ်ရက်လျှင် (၂) နာရီ တက်ရပါသည်။ သင်တန်းကြေးမှာ မြန်မာငွေ ၂၉၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန်းနံပါတ် ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင်းခွဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို့ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၆:၃ဝ) အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို့လည်း အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by မျိုးမင်းသူ on January 7, 2013 at 15:59
Permalink Reply by ngwe thazin thar on July 2, 2013 at 0:44
Permalink Reply by Diamond on July 2, 2013 at 6:19
Permalink Reply by esther on February 6, 2014 at 11:34
Permalink Reply by Aye Aye Khine on February 7, 2014 at 12:01
Thanks for about of givingacompliment. this topic is very needed for us because we are communicating in our daily with others.
Permalink Reply by thuranewin on September 10, 2014 at 11:56
This dialogue make us great.
We will try to learn more and use it when we meet with all friends.
Permalink Reply by U Aung Kyaw on January 31, 2015 at 15:50
Permalink Reply by Minn Thant on April 12, 2015 at 15:05
I really enjoy this lesson... :)
Permalink Reply by thin pyant pyant on July 15, 2015 at 21:11
Permalink Reply by Richard Michael William on July 16, 2015 at 1:44
Thanksalot Sayar
Permalink Reply by htaylim on June 3, 2016 at 20:03